Nwụrụ Anwụ Akụ Hacks ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
Gamepron nwere Deadside Hacks zuru oke maka mkpa egwuregwu gị niile. Ma ọ bụ Deadside Aimbot, ESP, Wall Hack, ma ọ bụ NoRecoil, ihe kachasị ewu ewu na Deadside Hacks dị ebe a.
Biko rụba ama: Tupu ị zụta ihe ndị anyị ji egbu egbu, gbaa mbọ hụ na ngwa ọrụ ị na-achọ ịzụta ka emelitere nso nso a ma ọ bụ ka dị n'ịntanetị. Ọ bụ ezie na anyị na-emelite ngwaọrụ anyị oge niile, ọ na-egbu oge n'oge nnyefe n'ọnọdụ ụfọdụ; mgbe ọ na-abụkarị ozigbo, ọ nwekwara ike were awa ole na ole. Ngwaọrụ anyị niile akpọchiri akpọchi HWID, nke pụtara na ị ga - eji ya naanị otu kọmputa - gbaa mbọ hụ na kọmputa gị dakọtara na ngwa anyị niile tupu oge eruo. Agaghị enye nkwụghachi ụgwọ ọ bụla ozugbo ilele igodo ngwaahịa ahụ!
Ndi A Huru Anyi Igbu Hacks
Deadside Hacks, Aimbot, Norecoil, ESP, Wall Hacks & Ọzọ
ịzụta Igbu Hacks na 4 nzọụkwụ
Buru egwuregwu ịchọrọ ịzụrụ ngwaọrụ maka, anyị nwere ọtụtụ egwuregwu ịhọrọ
Na ọtụtụ hack atụmatụ dị, bulie onye na suut gị n'ịghọ aghụghọ ule na-kacha mma
Mee ugwo gi! A ga-edozi ịkwụ ụgwọ anyị site na iji nhazi usoro ịkwụ ụgwọ naanị ebe a.
Nweta ohere gị Key & Budata Hackside na-egbughị oge!
Mgbe inweta ngwaahịa isi site Gamepron ị nwere ike ibudata gị Ndị aghụghọ ya
Gịnị mere eji eji Gamepron Deadside Hacks?
Deadside bụ ihe ọzọ lanarị egwuregwu nke ga-anwale ike gị, ebe ọtụtụ mmadụ agaghị enwe ndidi dị mkpa iji mee ọganiihu ọ bụla na egwuregwu a. Enwere ọtụtụ ihe ị ga - egweri mgbe ị na - egwu Deadside, nke pụtara na ihe nwere ike iyi "ihe na - agwụ ike" kama ngwa ngwa - ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ụtọ egwuregwu ahụ site na ilekwasị anya n'akụkụ akụkụ ahụ na-atọ ụtọ, ma ọ bụghị naanị ịla n'iyi, jiri Sideside Hacks na-aga na-arụ ọrụ ebube n'ihi na ị. Ndị na-egwu egwuregwu ga-eme ihe ọ bụla iji merie mmeri na Deadside, nke ahụ bụ n'ihi na nke a abụghị egwuregwu ọdịnala! Ọ dị ka ịgbapụ na Tarkov n'echiche na ị ga-achịkọta ihe ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ bara uru (dị ka ihe agha, ngwa agha, na ihe ịchọ mma), yana kwa na ọtụtụ ndị egwuregwu na Deadside nwere nka mara mma. Ma ị na-achọ ịpụnara ihe mgbe niile ma ọ bụ na-ekere òkè na PvP (Player Versus Player), a ga-enwe ohere maka mmadụ niile inwe ụfọdụ nke Deadside.
Nwere ike ịhọrọ ịrụ ọrụ n'akụkụ ndị enyi gị ma na-awagharị n'ime ala tọgbọrọ n'efu nke ị na-akpọ ugbu a n'ụlọ, ma ọ bụ ị nwere ike ịhọrọ ịgbada n'okporo ụzọ nke otu anụ ọhịa wolf. Ihe ọ bụla ị na-ahọrọ ime adịghị mkpa, dị ka anyị nasideside mbanye anataghị ikike na-aga na-ị na-onwem aka ọ bụla ọnọdụ na-abịa n'ụzọ gị. Ma ọ na - ewepụ ndị mmegide site na iji Deadside Aimbot anyị ma ọ bụ naanị ịdebe taabụ na ọnọdụ ha na Deadside Wall Hack, ọtụtụ atụmatụ bara uru ga - enyere gị aka ịchọta ihe ịga nke ọma na egwuregwu.
Ngwaọrụ anyị niile bụ ndị otu ndị ọkachamara ma ọ bụ isi mmalite sitere na otu n'ime ndị mmekọ anyị nwere ntụkwasị obi, nke a maara nke ọma n'ime obodo hacking. Nwere ike akpatre inwe obi ụtọ mgbe ị na-emeghe Deadside na anyị Ndị aghụghọ nyeere, dị ka ị maara na ọ na-aga na-eju afọ ahụmahụ ọ bụla otu oge ị Ibu Ibu egwuregwu. Ọ bụghị naanị nke ahụ mana iji ihe niile dị ịtụnanya gụnyere n’ime Ngwurugwu Ngwurugwu anyị abụghịzi usoro siri ike. Anyị emeela usoro a ka ọ dị mma ka ndị ọrụ novice kachasị nwee ike irite uru site na Deadside Hacks!
Oge ọzọ ị na - eche maka ị na - egwu egwuregwu kachasị amasị gị (ma ọ bụ ọnwụ ma ọ bụ ihe ọzọ), cheta na Gamepron bụ # 1 na-enye ndị na-ewu ewu Deadside Hacks maka ihe kpatara ya!
Deadside Wall mbanye anataghị ikike (ESP)
Deadside Player information ESP (Aha, Ogwe ahụike, ebe dị anya)
Ihu ihe ESP na nzacha
Aimbot nwụrụ anwụ
Mkpagbu ịdọ aka ná ntị ndị iro
Ọnọdụ super jump mode (enweghị ọdịda mbibi mgbe arụ ọrụ).
Ọkpụkpụ ọnwụ & ebumnuche igodo nwere ike ịhazi.
Ebe a na-akpọghachi onye na-akwụ ụgwọ
Ezigbo Igbu Hack atụmatụ
Anyị Deadside Player ESP bụ ngwá ọrụ na-enye gị ohere ịchọpụta onye ọkpọ ọkpọ ọkpọ ọkpọ site na opaque na ihe siri ike, nke pụtara na ị ga-ahụ ndị iro site na mgbidi!
Aren't bụghị naanị ike ịhụ ụdị ọkpụkpọ site na mgbidi, dịka ozi ndị ọzọ bara uru dị ka aha ha, ahụike, na anya dị.
Jiri Deadlight Item ESP na nzacha iji chọta ihe niile kachasị mma! Ikwesighi igbu oge na ihe ndi ozo mgbe i jiri Gamepron.
Iji Deadside Aimbot ga-enye gị naanị ike ịchọrọ iji merie otu onye iro kama ọtụtụ n'otu oge!
Okpokoro Bullet track (dị irè na mkpụmkpụ na etiti anya)
Anyị na-enyekwa gị nhọrọ nke ịchụpụ mgbọ gị site na iji atụmatụ Bullet Track, nke zuru oke maka mkpụmkpụ mkpụmkpụ na etiti.
A ịdọ aka ná ntị ozi ga-egosipụta na gị na ihuenyo mgbe ọ bụla onye iro na-aiming gị agwa, ma ọ bụ na ha nanị na-eme nso na-nso.
Ọnọdụ super jump mode (enweghị ọdịda mbibi mgbe arụ ọrụ)
Damageda mmebi ga-eme ka e gbuo gị n'oge ụfọdụ, nke ahụ bụ ọ gwụla ma ị na-eme atụmatụ iji ojiji anyị na-egbu egbu na ọnọdụ Super Jump!
Ọkpụkpụ ọnwụ & ebumnuche igodo nwere ike ịhazi
Can nwere ike hazie Deadisde Aimbot anyị n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche, dịka Ọkpụkpụ Prioritization na ọbụna nhọrọ ozugbo igbu!
Deadside aimbot anya ndenye ego
Jiri Njirimara A Na-ahụ Anya iji debe taabụ ebe ebe ịgba gị na-ada. Nwere ike ikwenye na-egbu ma na-emebi na ala site na iji nke a mma!
Iweghachite bụ nsogbu maka ihe doro anya, ebe ọ ga-emebi izi ezi gị. Bibie ya na igbapụ na obi ike!
Bụrụnụ ndị kachasị egwu na-egwu egwu na mbara ala
Deadside bụ egwuregwu ga-akwụghachi gị ụgwọ ma ọ bụrụ na ị rụ ọrụ ahụ n'ụzọ ziri ezi, nke ahụ bụkwa ihe iyi egwu anyị ga-enyere gị aka imezu. Onweghi onye iro n’egwuregwu a nke ị na - agaghị akụ n’eji iji Deadside Hack anyị, ma ozugbo ị nwalere ya n’onwe gị, ị ga - aghọta ebe anyị si. Were ohere a wee nweta aka dị elu karịa ndị iro gị site na iji Cheside anyị!
Popular Deadside Hacks na Ndị aghụghọ
ESP n'akụkụ na Wallhack
Ọzọ Deadside Hacks na Ndị aghụghọ
Naanị anyị nwere ihe kachasị ewu ewu na Hacks dị na ebe a na Gamepron, ebe anyị nwere ọkwa ụfọdụ iji kwado. Mgbe ịzụrụ ngwá ọrụ n'aka anyị, ị nwere atụmanya ụfọdụ anyị ga - ezute mgbe niile - ọ bụ ya mere anyị ji ewere onye nrụpụta kachasị mma na ntanetị ugbu a! Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-atụgharị isi mkpịsị aka ha ma na-egbu oge iji njirimara bara uru, naanị anyị ga-enye gị ngwaọrụ kachasị mma. Anyị na-eme nke a site na ịlele ihe ndị mmadụ chọrọ ịhụ na Deadside Hacks wee tinye atụmatụ ndị ahụ. Nwere ike ịtụ anya ịhụ nsonaazụ mgbe ị họọrọ iji aghụghọ na Gamepron, n'ihi na atụmatụ ndị ahụ yiri ka enweghị njedebe!
Na Deadside Aimbot, ESP, Wall Hack, na NoRecoil n'akụkụ gị, ọ nweghị ụzọ isi kọwaa ebe ị ga-ewe ihe. May nwere ike ghara ida ọzọ egbefight mgbe anyị nwụrụ anwụ Ndị aghụghọ na-arụ ọrụ! Mmeri egwuregwu ndị ọzọ taa na Gamepron.
Dị ka ọtụtụ Deadside Hacks ga-enye, anyị na-enye gị ohere ịnweta kacha mma Deadside Aimbot hụrụ n'ịntanetị. Ọ dị mma karịa ihe ndị ọzọ niile achọtara n'ịntanetị n'ihi atụmatụ niile dị n'ime, ebe anyị na-ahapụ gị ka ị hazie ahụmịhe ebumnuche gị. Nwere ike iji ngwa ọrụ a mee ka izi ezi gị bụrụ ihe na-egbu egbu oge niile, ebe ị nwere ike ime ka ụdị egwu abụọ a na-egbu oge na ọkpụkpụ ga-egbu ndị iro gị n'ụzọ kachasị amasị gị. Nwere ike ịhọrọ ilekwasị anya na isi ha, na-enyekwu gị isi (na ọtụtụ ndị na-egbu!) Karịa onye ọ bụla ọzọ na sava ahụ. Anyị Deadim Aimbot agbakọtara nke ọma, na-enye ndị ọrụ ohere ịbanye n'ime ihe ma bido igbu ndị iro mgbe ọ bụla. Fọdụ ụfọdụ na-agbarụ ihu na hacking, mana ha aghọtaghị ebe anyị si abịa. Mgbe ị nwetagoro inwe ebumnuche enweghị isi, ọbụlagodi otu elekere ma ọ bụ abụọ nke iji Deadside Aimbot anyị ga-ezu iji gbanwee obi gị.
Jiri ihe ịtụnanya anyị nwụrụ na ESP iji debe ndị na-emegide gị taabụ, yana ịchọpụta ebe ohere zuru oke dị! Deadside bụ egwuregwu nke ị na-apụ mgbe niile, nke ahụ pụtara iji Nkebi ESP na nzacha ga-agbanwe nke ahụ site na ịbụ ihe ịma aka nye ikuku. Nwere ike ịchọta ihe kachasị mma na ngwa agha site na iji Deadside ESP na Wall Hack iji lelee ya nke ọma, na-enye gị foto zuru oke nke ihe dị n'akụkụ nke ọzọ. Nke a bara uru maka mgbe ị na-enyo na ndị iro na-ezo na n'akụkụ nke ọzọ, dị ka ị nwere ike gbanye Deadside Wall Hack ma kpughee ha n'otu ntabi anya.
Ma ị na-eme atụmatụ na igwu egwu naanị ma ọ bụ ndị enyi, iji Deadside ESP na Wall Hack ga-enyere gị aka inwe ọganihu ma nweta ngwongwo ka mma n'egbughị oge ọ bụla. Ndị na-agwụ ike na-agwụ ike gwe ọka ga-shortened, nke bụ ihe niile i nwere ike na-atụ anya!
Anyị nwụrụ anwụ mbanye anataghị ikike na-atụmatụ ndị na-amasị nke a akara ukwu mma, nke bụ ezigbo maka mgbe ị na-trailing onye iro na-eche zuru okè oge tie. Oge igbu oge bụ oge, maka na ị chọghị ọsọ ọsọ - iji njirimara akara ukwu iji gbanye anụ oriri gị dị mma, mana ọ dịkwa mkpa ka ị mara ma ị na-eru nso ma ọ bụ na ịbịaghị. Nke a bụ ebe atụmatụ Mmebi Dị Elu na-abata, ebe ị ga-enwe ike ịhụ otu onye iro gị si dị anya. Nke a na - eme ka nkwekọrịta ahụ dị mfe oge ebe ọ bụ na ịmara mgbe ị ga - eru nso; n'oge ahụ, ọ bụ oge iji kwadebe maka agha!
Kwado atụmatụ mmebi ahụ dị elu ma mee ka ha chee na ha esonyeghi na ihe nkesa gị. You'll ga-eme ụzọ ọzọ mmebi karịa ihe ọ bụla ọzọ na-emegide ị na-abịa gafee, na Anya atụmatụ ga-eme ka ị na mgbe nwere obibi a "mberede agha".
Enwere ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ iji tụlee irite uru mgbe ị na-eji Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ anyị, ọ bụ ya mere ndị ahịa anyị ji nwee mmasị na itinye okwukwe ha na Gamepron. Mgbe ị matara na ngwa ọrụ nwere njirimara niile ị nwere ike ịchọrọ, gịnị kpatara ị ga - eji nyere ndị ọzọ aka? Anyị nwere ike inyere gị aka mezuo ihe ọ bụla ịchọrọ mgbe ị na-egwu Deadside, ọ bụ naanị ihe gbasara ịnweta ohere anyị na Deadside Hacks na Cheats. Anyị na-enyekwa atụmatụ nke ọtụtụ ndị na-eweta mbanye anataghị ikike ndị ọzọ anaghị emejuputa onwe ha, dị ka Radar 2D na atụmatụ ịdọ aka na ntị nke ga-eme ka ị mụrụ anya oge niile. Shotgba egbe n’azụ bụ ihe gara aga mgbe ị na-eji Gamepron aghọ aghụghọ ule!
Can nwere ike izere iwere mmebi ọdịda na ịnwụ kwa, dị ka "Super Jump Mode" ga-eme ka ị daa site na nnukwu ọnụ ọnụ ugwu kachasị eche n'echiche na-enweghị mmebi ọ bụla. Nke a bara ezigbo uru mgbe ị nọ
na-arụsi ọrụ ike iji zere onye iro!
Nwụrụ Anwụ Hacks ajụjụ
Gịnị mere anyị ji nwụọ Hacks
Ọ bụrụ n’ịchọrọ inwe mmetụta dịka ị jiri ego gị nọrọ ebe kwesịrị ekwesị, iji Deadside Hack bụ nhọrọ kacha mma enwere ike. Na niile nke kacha mma atụmatụ ị na-achọ na a Deadside mbanye anataghị ikike, e nwere nnọọ obere na ndị iro gị nwere ike ime iji gbochie gị mmeri; na anyị Deadside eji Aghọ Aghụghọ Ule nyeere, ị na-aga na-a na-abụghị nkwụsị na-emeri igwe.
Kedu ihe kpatara anyị ji egbu Aimbot
Ugboro ole ka ị na-achọpụta na ebumnuche gị dị obere? Ọbụlagodi na ị na-enwe ụbọchị ọjọọ ma ị nwere ike ime nke ọma, ọ ga-enwe mmetụta na ole ịga nke ọma ị na-ahụ na egwuregwu. Mgbe ịchọrọ imeri ọtụtụ egwuregwu gị na enweghị ajụjụ ọ bụla a jụrụ, ịnwere ike ịdabere na Deadside Aimbot iji nyefee nsonaazụ ịchọrọ.
Ihe kpatara anyi ji nwuru anwu ESP
Iji Deadside anyị ESP bụ ihe dị mkpa, n'ihi na ọ bụghị naanị na ị ga - enwe ike ịhụ ihe egwu nwere ike ịdị site na ebe siri ike, mana ị ga - enwe nhọrọ nke ịhụ ngwongwo kachasị mma n'elu nke ahụ! Don'tkwesighi imebi oge gị niile site na ụlọ na-enweghị ngwụcha, ebe ị nwere ike iji Nkebi ESP na nzacha iji chọpụta ebe ngwa agha kachasị mma (na loot!) Na-ezo.
Kedu ihe kpatara anyị ji nwụọ na Wallhack
Anyị Deadside Wall mbanye anataghị ikike, ị pụrụ ịhụ ndị iro site ma siri ike ma na opaque na-ebupụta, nke na-eme ka atụmatụ maka ọgụ na ambushes mfe. Ga-ama mgbe niile mgbe onye iro na-ezo na n'akụkụ nke ọzọ nke a mgbidi na a mma nyeere, na a lanarị egwuregwu dị ka Deadside, nke ahụ bụ ihe ị ga-achọ ịhụ.
Kedu ihe kpatara anyị jiri Norecoil
Ihe ịghaghachi na Deadside dị adị dị ka ọ dị, na onye ọ bụla egwuri egwu maka onwe ya nwere ike ịgba akaebe na nke ahụ. Mgbe ịghaghachi na-efunahụ gị egbe n'ọtụtụ oge, nsogbu na oge eruola ka ị nweta ohere mbanye anataghị ikike anyị. You'll ga-eche etu ị si egwuri egwu tupu oge ịnwale ọrụ NoRecoil anyị maka oge izizi.
Etu ibudata ihe kacha mma Deadside hacks
Ngwurugwu kacha mma kachasị mma dị ebe a na Gamepron, n'agbanyeghị ihe onye ọzọ na-ekwu. A ga - enwe ọrụ n’ebe ahụ na - ekwu na ha nwere mma kacha mma, mana nke ahụ abụghị eziokwu; ma ọ bụrụ na ịnwetaghị ya na Gamepron, ọ gaghị abụ ihe kacha mma Nwụrụ Anwụ mbanye anataghị ikike. Tinye ụkwụ gị kachasị mma ma zụta otu igodo ngwaahịa anyị taa!
Gịnị mere gị Deadside hacks dị oké ọnụ karịa ndị ọzọ
Anyị nwere ọnụọgụ ole na ole nke ndị ọrụ anyị nọ ebe a na Gamepron, nke pụtara na enwere ike ịnwe oge ebe ịnweghị ike ịzụta ohere. N'ihi ya, ọnụahịa maka igodo ngwaahịa anyị ga-abawanye n'ihi oke ọrụ anyị - ọ bụghị naanị nke ahụ, mana Deadside Hacks (na aghụghọ ọ bụla ọzọ anyị na-enye) bụ 100% achọpụtabeghị.
Anyị na-enye gị nhọrọ nke ịzụta igodo ngwaahịa maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge ọ bụla i nwere ike iche na ịchọrọ, ebe anyị na-enye igodo ngwaahịa kwa ụbọchị, kwa izu na kwa ọnwa. You nwere ike mbanye anataghị ikike n'ihi na dị ka ogologo ma ọ bụ dị ka obere ka ị ga-achọ mgbe ị na-ahọrọ na-aghọ aghụghọ na Gamepron, dị ka anyị na-etinye ike na aka nke ndị ọrụ anyị.
Awesome Igbu Hack atụmatụ